Rippaablikiin Afriikaa Waalta Eegumsa Cimaa Jalatti Filannoo Geggeessite
Rippaablikiin Afriikaa Waalta Filannoo Geggeesite
Ripaablikiin Afriikaa waaltaa baatii muddee keessa adeemsi filannoof sagalee kennuu hookkara ka’een danqamee booda dilbata kaleessaa eegumsa cimaan taasisamee filannoo paarlaamaa marsaa lammataa geggeesee jira.
Magaalaa galma mootummaa Banguuyii keessatti xiqqoof boodatti hafuus haala gariin geggeessamuu isaa qaamni filannoo raawwachiisu beeksisee jira. Poolisii hedduun eegumsa ennaa taasisutti jiraattonni lakkoobsaan xiqqoo ta’an toora galanii argamu.
Hanga ammaatti Banguuyii keessatti haala gaariitu mul’ata jechuu dhaan dubbi himaan abbaa aangoo filannoo biyyoolessaa Theophile Momoko’aamaa ibsanii jiran.
Angawoonni ennaa prezidaanti Faustiin Archaang Touadeeraa filannoo injifatan hookkarri ka’e akka irra hin deebine yaaddoo qabaatanis, angawoonni kanneen prezidaantii duraanii Fraanswaa Boziizi’n hoogganamu jechuun tokkummaan mootummootaa beeksise ennaa sagaleen kennamu waliin dha’ameera jechuu dhaan naannoo sana to’atan.
Lootee seentoni baatii Amajjii keessa magaalaa Baangu’iitti dhiyeessiin midhaan nyaaaa akka hin darbine danquu dhaan uummata 200,000 qe’ee irraa waan godaansisaniif biyyattiin ammas walitti bu’iinsa lubbuu kumaan laka’amu kan kurna darbeetti deebiti yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira.
Mootummaa fi naga eegdonni tokkummaa mootummootaa filannoon dilbata kaleessaa sababaa humni itti dabalaa bobba’ee, qabiyyeen ripxe loltootaa to’atamee booda nagaan akka geggeessamu amantaa qaban ibsanii jiran.
Sodaa nageenyaaf jeha baatii Muddee keessa namoonni xiqqoo qofti ba’anii sagalee waan kennaniif, kaadhimamtoonii mormitootaa ba’ii filannoo fudhatama qabaachuu isaa falmanii jiran.